जिपिआरएस चलाउने आठ गुणाले बढे – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
३० असार २०७७, मंगलवार ०४:१८ English
जिपिआरएस चलाउने आठ गुणाले बढे
काठमाडौ, १ चैत । मोबाइलबाट इन्टरनेट (जिपिआरएस) चलाउनेको संख्या दुई वर्षको अवधिमा उच्च दरले बढेको छ । यस अवधिमा मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्यामा भएको उच्च वृद्धिका कारण जिपिआरएस चलाउनेको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको हो ।
यस्तै जिपिआरएस शुल्कमा आएको कटौती, मोबाइल सेटको घटेको मूल्य, बढ्दो प्रतिस्पर्धाका साथै सामाजिक सञ्जालप्रति बढेको युवा रुचिले पनि जिपिआरएस चलाउनेको संख्यामा बढाउन सघाएको छ ।
नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार दुई वर्षअघि (२०६६ पुस) सम्म ५ लाख जिपिआरएस प्रयोगकर्ता थिए । गत पुसमा ३७ लाख २० हजार पुगेको छ । यो वृद्धि निरन्तर कायम छ । तर जिपिआरएस चलाउनेको संख्या कुल मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्याभन्दा धेरै कम हो । हाल नेपालमा १ करोड ३६ लाख मोबाइल प्रयोगकर्ता छन् ।
नेपालका डाटा -इन्टरनेट) प्रयोगकर्तामा सबैभन्दा बढी हिस्सा पनि जिपिआरएस प्रयोगकर्ता रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको कुल संख्यामा जिपिआरएको हिस्सा ९२ प्रतिशत छ ।
पुसमा प्राधिकरणद्वारा प्रकाशित तथ्यांक अनुसार इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या ४० लाख ४७ हजार छ । इन्टरनेट घनत्व १५ दशमलव २० प्रतिशत छ ।
‘मोबाइल लिएपछि त्यसैबाट इन्टरनेट चलाउन मिल्ने भएकाले यसको विस्तार उच्च भएको हो । यस अवधिमा केबल इन्टरनेट र अन्य प्रकारका वायरलेस इन्टरनेट सेवाको विस्तार भने सुस्त रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
१ चैत्र २०६८, बुधबार ०९:०२ मा प्रकाशित
सगरमाथा टेलिभिजन १३ वर्षे यात्रा सफलतापूर्वक पूरा गरी १४ औं वर्षमा प्रबेश	२७ असार २०७७, शनिबार २१:२९
पाल्पामा कृषि उपकरणको प्रयोग बढ्दो	२६ असार २०७७, शुक्रबार १४:१६
व्यावहारिक अध्ययनका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्दै वनस्पति केन्द्र	२२ असार २०७७, सोमबार १४:४३
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गरिने	१८ असार २०७७, बिहीबार १९:२२
भाइरबले तोड्यो फेसबुकसँगको सबै सम्बन्ध	१६ असार २०७७, मंगलवार १९:१७
किसानलाई ट्रयाक्टर र औजार वितरण	१६ असार २०७७, मंगलवार ०८:५६
यमनमा हवाई हमला, ७ बालबालिका र २ महिलाको मृत्यु
३० असार २०७७, मंगलवार १०:०१
३० असार २०७७, मंगलवार ०९:४६
भगवान राम नेपालमै जन्मिएको भनेपछि प्रधानमन्त्रीको सर्वत्र आलोचना
३० असार २०७७, मंगलवार ०९:३७
उमा थापाको २०७ औ भानुजयन्ती विशेष कविता : पुनर्जन्म हुन्थ्यो भने!
३० असार २०७७, मंगलवार ०१:३२
काठमाडौँ, ३० असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान रामचन्द्रको जन्मस्थल अयोध्या नेपालमा पर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि भारतमा..
थप ३ नीजि प्रयोगशालालाई कोरोनाको पीसीआर परीक्षण गर्ने अनुमति
काठमाडौँ, २९ असार । सरकारले थप तीन निजी प्रयोगशालालाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को पिसिआर परीक्षण गर्न अनुमति दिएको..
सम्झना भानुको:२०७ औ भानुजयन्ती
नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २०७औँ जन्मजयन्ती कोरोनाका महामारीबिच आज देश तथा विदेशका विभिन्न..
पहिरोमा पुरिएर तनहुँमा २ जनाको मृत्यु, ५ वेपत्ता
तनहुँ, २९ असार । अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोमा पुरिएर तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका र व्यास नगरपालिकामा दुई जनाको..